Galgaduud: Waxaa laga cabanayaa colaadaha ka curta dhulka daaqa | KEYDMEDIA ONLINE
Galgaduud: Waxaa laga cabanayaa colaadaha ka curta dhulka daaqa
Shacabka xoola dhaqatada ah ee Gobolka Galgaduud ayaa la dhibaatoonaya colaado sokeeye oo soo laalaabtay, kuwaas oo ka curtay dhul daaqsimeed lagu mrmay.
GALGADUUD, Somaaliya - Leyla Cali Xasan iyo qoyskeeda oo ka kooban sagaal qof ayaa dib ugu soo laabtay gurigooda oo ku yaalla degaanka Baxdo-Gaabo, kadib markii ay 16 maalmood ku hoos jireen geed hoostiis oo ay kaga gabanayeen dagaal beeleed ka dhashay dhul daaqsimeed ku yaal gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya.
Waxay ka mid ahaayeen ku dhowaad 2,000 oo qoys oo ku barokacay iska horimaadkii ka qarxay Baxdo-Gaabo 3dii Juun. Leylo ayaana awood u yeelatay inay soo laabato ka dib xabad joojin ay dhaqan geliyeen Ciidamada Federaalka Soomaaliya ee la geeyay aagga xasaradaha.
“Markii aan maqlay xabad joojin ayaa jirta oo walaalaha diriraya la heshiisiinayo, waxaan dareemay farxad, waan soo noqday hadana waxaan sugeynaa heshiis nabadeed oo waara”. ayay tiri Leyla oo ka mid ah xoolo dhaqatada.
Colaadda degaanka ka aloosan ayaa ka dhalatay qoditaanka barkado biyood ku yaalla dhul loo calaamadeeyay daaqa oo kaliya, sida ku xusan heshiis ay 2015-kii wada gaareen odayaasha deegaanka ee ka soo kala jeeda laba beelood ee dirirtu ka dhaxeyso.
Leyla, waxay sheegtay inay xoogaa raashin iyo maacuun ah ku qaadatay owr, lana carartay qoysas kale, kuwaas oo naftooda ula baxsanayay dhanka degaanka Abeesaale oo 25 kilomitir u jira Baxdo-Gaabo.
Cubtan Axmed Afrax, waxay u qaxday tuulada Duduma-Cadde, oo 18 kiiloomitir bari ka xigta Baxdo-Gaabo, halkaas oo iyada iyo afarteeda carruur ah u martiyeen qof qaraabo ah muddo 18 maalmood ah. Waxay ka tagtay xoolaheeda oo ka kooban 100 ari ah oo daaqayay dhulkii lagu muransanaa maalintii colaaddu ay qarxday.
“Waxay ahayd duhurkii markii rasaasta la isweydaarsanayay oo labada dhinacba ay bilaabeen inay is rasaaseeyaan. Kama fakarin inaan arikeyga raadsado,”Ayay tiri.
Waxay soo noqotay 21-kii Juun waxayna wali raadineysaa arigii ay ka barakacday, Ilaa iyo hada waxay heshay 50 kamid ah 100-keedii neef, sida ay sheegtay.
Guddiga loo saaray xalka colaadaha degaannada Baxdo-Gabo iyo Docolay oo ay caawinayaan Ciidamada Federaalka ayaa burburiyey dhamaan afar barkadod oo hore laga qoday dhulkii lagu muransanaa, kuwaas oo aha ubucda colaadaha.
Wakiilka Docolay, Cilmi Axmed Aadan ayaa sheegay in dadaallada lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka ay socdaan, waxaana dadka lagu wargaliyay in dhulka lagu muransan yahay aan laga qodi kari baraago iyo ceelal biyood midna.
Gobolka Galgaduud, in ka badan saddex goobood ayay ka aloosan yihiin colaadaha ka dhashay dhul dhaaqsimeed lagu murmay, maamulka Galmudug ayaana u muuqda inuu ku fashilmay wax ka qabashada arinkaan soo laalaabtay.